Glass faibha Akazadzisa nebwe denga jira RY720-B - China hubei Shengyu Building Materials
FOB Price: 5.65-9.99 / mativi mamita
Shengyu chakaita zvokugadzirwa nebwe denga jira, zvinenge zvakazara Geloy Asa nebwe, chinokosha 3-rukoko co-extruded denga papepa. Traditional denga usina kukonekita muenzaniso dzomutambo nemavara chiedza rakanyorwa kuti zviri nyore kuisa. Zviri yakasimba chaizvo rakanyorwa, husingakwanisi mhepo uye nechimvuramabwe, rinogona kushandiswa apo yakakwirira esthetic chinhu chinodikanwa. Chii zvakawanda, inoramba chezvipfuwo ruvara uye zvivako mumuviri pasi Ultra-Violet nemwaranzi, dampness, kupisa, chillness nezvainoita.
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm sezvo zvaida (integer akawanda pamusoro 219) 6kg ± 0.1kg Matte kana Glossy Blue, Tariro Red, Gray, Deep Red, Terracotta
Sezvo pamusoro rukoko zvinhu, Geloy ouinjiniya nebwe chakaitwa GE ndiye zvemariro akakodzera Outdoor kushandiswa. Kunyange nevanhu Ultra-Violet nemwaranzi, dampness, kupisa, chillness nezvainoita, zvigadzirwa kuramba kutsiga ruvara uye mumuviri zvivako. Miedzo yaiitirwa Kuchembera Test nechepakati Arizona uye Florida zvinoratidza kuti idukusa △ E 5 mukati mumakore 10.
Shengyu chakaita zvokugadzirwa nebwe denga pepa rine simba kukwanisa rinorema kubereka. The bvunzo, kwaitungamirirwa Shanghai Municipal Building Material chinoumba Quality Rinotungamirira uye Test Station, zvinoratidza kuti hapana mitswi nemamiriro 660mm zvokutsigira span uye 150kg kuiswa mutoro.
Mumwe mwero nhindi 720mm denga jira anoyera 5,9 ± 0.1kg.
Previous: Asa uPVC Corrugated denga papepa W1025
Next: High temperatuer & ngura kuramba denga papepa
Panguva kushandisa, zvigadzirwa zvinofanira risingazoputsirwi kudzivisa inokuvadza kana scratching chigadzirwa pamusoro. For chete jira refu kupfuura 8m, zvakakwana kutsigira pfungwa dzinokosha kudzivisa Cracking kuti Tile.
Ndapota ungano rabha isapinda mhete kupinda gasket asati kugadzira ari roof.The screws havafaniri kupinda zvakare tightly.Finally kuvaparadzanisa isapinda butiro angonanga screws zvakasimba.
screws anofanira ngadzirambe vertically kuti jira surface.Screws pamwe urefu 75mmand dhayamita ose 6.3mm inodiwa kugadzirisa mukuru Tile.
Shengyu nebwe jira kushandiswawo denga pitches kubva 20 kusvika 80.For kukwirira kwenzwi mhiri chikuva ichi, inokosha matanho anofanira kutorwa panguva installation.
1. Deck mamiriro
pemvura uriri inofanira anotsvedzerera, mashoko ari uriri zvinofanira deformation duku, uriri inofanira kupfuura 12mm gobvu (maererano purlin span).
A 3-5mm musiyano pakati shop maviri kunokosha kuti deformation.
The dzisapinda mabhanzi zvinofanira aifanira kubhedhenura zvakanaka uye vertically pamwe overlaps yakarurama.
2. Steel maumbirwo
The pamakona hwendarira mamiriro inofanira chaizvoizvo kuzvidzora panguva kubudiswa, izvo zvichakanganisa kukwirira kwenzwi reimba. The kutsaudzira pamusoro pamakona achaita chinhu gogonera padenga.
Ali ari steels vanofanira Anti-ngura zvakaipa.
3. yanyatsosimba kongiri maumbirwo
The underlay nekongiri hakuna inokosha simba pamusoro evenness reimba, apo midzi inoisa uye purlins vanofanira zvakatsvinda chaizvo uye ndege.
Vose simbi nehuni midzi inoisa uye purlins vanofanira Anti-ngura kubatwa kuwedzera upenyu denga mamiriro.
Steel purlins zvinofanira welded kuti simbi midzi inoisa uye huni purlins zvinogona arovererwe huni midzi inoisa zvakananga.
Attention! No denga Tile anogona kugadzirisa zvachose dambudziko mvura pachayo, nokuti kuipa dzimba, panofanira kuva underne
1. Anti-ngura kurapwa: Metal purlins anofanira zvemapuranga chete paiva Anti-nengura pendi uye vaviri akaturikidzana kuti vasapedze coatings. Wood purlins zvinofanira zvinenge zvakazara Anti-ngura kana mafuta Asphalt.
2. pamusoro purlin vanofanira 180mm chinhambwe kubva muhomba mutsetse kuti kuisa muhomba usina kukonekita.
3. pasi purlin vanofanira 50-70mm chinhambwe kubva eave.
4. purlin nzvimbo iri 660mm kuti Royal Tile.
Linear Heat Kuwedzera
Shengyu nebwe denga jira ane coefficient pakati Linear kuwedzera 0.0000493 / ℃ .Kuti kubvumira zvakajairika Linear rokuwedzera jira, isu angarayira kuti vanochera gomba dhayamita 2-3mm ihuru kupfuura sikuruu, uye ipapo ita kutara kuti kudzivisa chero dilatation of sheet.Please havapi kutara zvakare zvakasimba.
Rairira kunangiswa kunokosha chaizvo kuti pasinei mhando denga mamiriro, chete ichi chinogona machira yaungana akanyatsotevera uye twasu The wehunyambiri mutsetse inofanira kuva 50 ~ 70mm kuti richienda sidewall kuti gabled denga, uye zvido zvevanhu mutsetse 150mm kune pasi purlin .
Uise wokutanga jira sezvo pedyo sezvinobvira hunyambiri pakuvaka mutsetse, isa padenga Tile wehunyambiri Napamusara wechipiri wokutanga, maererano kutsigira framework.The wokutanga mutsara anofanira pasi hapana ezvinhu anofanira Perforated.
Fixings zvinofanira pagungano chinozunguzirwa penyika Tile.
Kunyanya kutarisirwa anofanira kutorwa kana tsitsi Mutsara wokutanga nokuti machira refu kunyange kure lining shomanana millimeters neimwe jira kunogona zvinetso.
Zvadaro woenda kuita kutara wechipiri, bindepinde papepa wechipiri laterally padenga wokutanga uye kugadzirisa nokuzvidzora screws pamusoro Tile rokutanga yepasisa izvo rinoenderana bindepinde.
Kuti tirambe yakarurama inogara fixings tinoratidza kushandisa tambo nezve wakaiswa zvikuru ari danda.
Rambira Saizvozvowo yechitatu uye vachibereka machira, uye kuzodzosera kuongorora mamiriro machira mana, ipapo kuisa vamwe Tile ose.
Unganidza machira saizvozvo kusvikira kwokupedzisira mumwe, kana zvakakodzera, noupamhi kwokupedzisira jira vangatofanira kuzovauraya maererano.
Attention! jira ose anofanira vakaungana sezvo pedyo sezvinobvira rimwe vakaprofita.
Nokuti Napamusara wechipiri tinoratidza sezvo nguva dzose kuti ukatanga kubva kuruboshwe jira kuti unotemwa mu hafu lengthways (mitatu yamabwe usina kukonekita) .This kunoita kuti urambe ane chinjikira bindepinde pakati vakadzungairira mumitsara, uye sezvo vakadaro iwe kudzivisa Crossover kuti machira zvina bindepinde.
The machira yasara akatema pakutanga havasi zvaparadzwa vanogona kushandiswa sapanguva pakuguma nemakadhibhokisi sezvo kugadziriswa.
Pedzisa pakatarisana divi saizvozvo.
Mumutsetse hunyambiri mitsara usina kukonekita pakatarisana neavo rokutanga, kuti ndikokere muhomba Tile.
Attention! Nokuti kuderedza materu kana kunyanya vhuvhuta kana rainly munyika dzine zvakakodzera namira bindepinde nokuda nebwe sealant kana nesilicon sealant.
Nokuti Triangle divi mana Nemikwidza denga, jira wokutanga anofanira vakatanga kubva pakati, ipapo ramba mirayiridzo vose kurudyi.
Kucheka machira achitevedza hudyu mutsetse kuti asesemble diagonal muhomba
Kugadzwa muhomba Tile vanofanira kutanga kubva mumwe side.For pakutanga Tile, inofanira hafu kuchekwa kudzivisa Crossover kuti machira zvina bindepinde.
Self-screws pamwe nokureba 75mm uye dhayamita pamusoro 6.3mm hunozodiwa kugadzirisa muhomba Tile munzvimbo huru tile.Take kungwarira kugadzirisa muhomba pedyo nemucheto saka haana kuva nezvinetso infiltration.
Kana kugadzwa diagonal muhomba, inofanira dzichienderana kuramba kubuda pamagaro line.Self-screws pamwe nokureba 75mm uye dhayamita pamusoro 6.3mm inodiwa kugadzirisa prefabricated micheto kune huru tile.Diagonal muhomba Tile inofanira kuiswa kubva pasi kuti top nomunhu bindepinde pamusoro 50mm.
A-nzira nhatu kubatana rinoshandiswa sezvo kubatana chinhu pakati Linear muhomba uye diagonal imwe mana materu denga.
The syöminen akasikwa nokubatana zviviri converging pitches inonzi valley.Position uye kugadzira mbiri dzakafanana rinoparadza, 240 mm kubva pakati syöminen, kuenderana kuti syöminen mumupata.
Kugadzirisa mupata munoyerera kwakaitwa chakaita zvokugadzirwa nebwe Panel kana simbi pamusoro rinoparadza uchishandisa kuzvidzora screws kana nezvipikiri.
Kwakakurudzira mupata rwakapetwa zvinogonawo kushandiswa mupata gutter.Position pamusoro pakona kutangira kubva muhomba mutsetse, anoiswa pasi nokungwarira pamusoro slab.Begin kugadzirisa yokunyanyisa micheto mumupata uri rinoparadza uchishandisa kuzvidzora screws kana nezvipikiri.
The machira chaienzanirana kumupata mutsetse inofanira kwerubwinyo rwakagara rwuripo zvakaumbwa pamberi Positioning, asi kusiya mukana yokuturika kwavari zvakare, mushure kugadzirira, kuti zvakakwana yakarurama mupata mutsetse.
Shandisa sidewall kuvheneka yakaitwa Shengyu nebwe Panel kana simbi, kuomerera kuti rinovaima bhodhi pamadziro uye usina kukonekita kubudikidza kuzvidzora screws kana nezvipikiri uye chisimbiso rokumusoro kuguma kwepfumo pamwe nesilicon sealant.
Use sidewall kuvheneka yakaitwa Shengyu nebwe Panel kana simbi, kuomerera kuti rinovaima bhodhi pamadziro uye usina kukonekita kubudikidza kuzvidzora screws kana nezvipikiri uye chisimbiso rokumusoro kuguma kwepfumo pamwe nesilicon sealant.
Shandisa chakaita zvokugadzirwa nebwe kana simbi flashings, kuomerera kuti rinovaima bhodhi pamadziro uye usina kukonekita kubudikidza kuzvidzora screws kana nezvipikiri uye chisimbiso rokumusoro kuguma kwepfumo pamwe nesilicon sealant. (Ona chati pamusoro)
Flashings vari akakurudzira kupatsanurwa pane nzvimbo nokuda simbi bhodhi, sezvo denga pitches uye chinzvimbo chimneys vari shanduka kuti matenga zvakasiyana.
Aluminum kana kwakakurudzira mabhanzi inogona kushandiswa kubatana pakati usina kukonekita uye chimney.Stick kuti mabhanzi kuna machira ose chimney.Fix mumwe mugumo mabhanzi kuti Chimney kubudikidza nezvipikiri uye zvadaro kunama kuguma yepamusorosoro.
The machira inofanira vakaungana nenzira inozivikanwa kusvikira kuwana pedyo skylight.
Tora chaiyo kuyerwa skylight, kuti chaiyo slots pamusoro jira ane anonzwisisa polisher kana inotakurika mutete-zino saha.
Bindepinde kutungamirira hinji nokuda rezasi kubatana pamusoro tiled jira uye kuumba nayo nemaoko ako kuti ndikwane jira zvakanaka.
Zvadaro, kuisa shaped jira, zvakafanira zvakanaka kurutivi uye okumusoro kubatana uye bindepinde zvisakakwana, pamwe kumugumo muduku zvinhu kutungamirira hinji pamusoro yepazasi parutivi skylight.
Ndapedza kuungana diagonal muhomba, dzinoisa mashoko chinouraya diagonal muhomba chidimbu makadzika kuguma diagonal muhomba, uye kugadzirisa kuti diagonal muhomba kubudikidza rivets.
Fiber Sheet For denga
Washington City Offices Roofing Materials
Washington City Offices Skylight Sheets
Green Washington City Offices Roofing
Plastic PVC Roofing Sheet For kuteurwa
PVC Material Building Materials Roof usina kukonekita
Royal Plastic Roof usina kukonekita
White Washington City Offices Sheets
Wekishopu Roof Tile
High temperatuer & ngura kuramba denga ...